I-China PVC Yokuhlobisa Ishidi LOKUQHUBEKA KWENKQUBO Yokwakha neFektri | Jiahao
I-PVT Marble Sheet Line yizingcwecwe ezintsha zokuhlobisa imvelo, ingubo yayo engaphezulu ne-PVC ifilimu ngemuva kokwelashwa kwe-UV, ubulukhuni bendawo buthuthukiswa kakhulu, bungaphezulu kwemvelo, bungangenwa manzi, bungacimi umlilo, bungazweli ekuqaleni, bushelelezi futhi buhlanzeke kahle obuchazwe kahle, ukumelana ne-Corrosion . Izinhlobo eziningi zamaphethini e-PVC wokuzikhethela, lokhu kukhulisa kakhulu ukukhethwa, kuyamukelwa futhi kwamukelwa yimakethe.
Umugqa Womugqa Wemabula we-PVT
Isetshenziswa kabanzi emakhabethe, umnyango oslayida, owendlu, i-KTV, amahhotela, amathilomu we-inthanethi, amakilabhu wokuzijabulisa. Ngaphezu kwalokho, ungakhetha imishini yamaphrofayli ukukhiqiza izinhlobo ezahlukahlukene zamaphrofayli emabula we-PVC, okwenza umhlobiso uphelele.
Incazelo yomkhiqizo: Ubukhulu: 2-6mm, ububanzi: 1200mm
Ibhodi lokuhlobisa le-PVC elikhiqizwa umugqa wokukhiqiza wokuhlobisa webhodi le-PVC lakhiwe nge-PVC njengezinto ezisetshenziswayo eziyinhloko, ngokusebenzisa ukwelashwa kwe-denaturation, ukungeza i-stabilizer, i-ejenti yokuqinisa nezinye izithasiselo. Isisindo sisisindo, kulula ukusifaka, asinamanzi nobufakazi benundu. Iphethini yendawo ishintsha kakhulu. Iyamelana nokungcola, kulula ukuyihlanza, futhi inokusebenza okuhle kokufakwa kwemisindo nokushisa, Ikakhulukazi, ukwengezwa kwezinto ezisebenzisela ilangabi kule nqubo entsha kwenza kube okuphephile ukusebenzisa. Ipuleti le-PVC le-gusset lepulasitiki linokumelana okunamandla kwamanzi nokuqina kokukhuhla. Isetshenziswa kabanzi ekuhlobiseni kwangaphakathi nangaphandle kwemboni, imoto, umkhumbi, isitimela, indlu, njll.
Ingagcwaliswa, iqiniswe, iqiniswe, iqiniswe, i-flame retardant, iguqulwe, futhi indawo yayo ingabhalwa ngeqhwa futhi iqhwa. Izinga lokushisa eliphakeme (cishe i-100 ℃), izakhiwo ezinhle zomzimba nezomshini. Ikakhulu esetshenziswa embonini yamakhemikhali, ikhemikhali fiber, ukuvikelwa kwemvelo, imishini yokulungisa imishini nezinye izimboni ezihlobene.
Inkampani yethu idonsa futhi igaye ubuchwepheshe bokuthuthuka bakwamanye amazwe nenqubo, futhi ithuthukise umugqa wokukhiqiza we-plate extrusion, osetshenziselwa ukukhiqizwa kwe-PE namanye amapuleti. Ububanzi bokuqina kwepuleti bungaba ngama-20-60mm, futhi ububanzi bepuleti bube ngu-750-1800mm.
Imikhiqizo yomkhiqizo odumile emhlabeni ingasetshenziselwa izingxenye ezahlukahlukene zemishini yolayini wokukhiqiza. Kuhlanganiswe neminyaka eminingi yenkampani yethu yobuchwepheshe bokukhiqiza imishini yamapuleti nesipiliyoni, kuyenza ithembeke futhi iphelele. Imikhiqizo yayo inezinzuzo eziningi, ezifana nobuso obushelelezi, iphutha elincane losayizi, ukumelana nokugqwala, ukwahlukanisa okuqinile nokunye.
Umugqa Weshidi Lokuhlobisa we-PVT
Lo mkhiqizo usetshenziswa kabanzi njengokushintshwa kwamapuleti enkuni, amashidi e-aluminium-plastic. Ifaka ukuvikelwa komswakama, ukuvikela ukugqwala, amandla amahle okugoba, akukho phunga elicasulayo, isisindo esiphansi, nokuvuselelwa kabusha.
Ukuhlobisa Kwasendlini: Kusetshenziswa njengokuhlobisa okungaphezulu kwezindonga zangaphakathi, ama-wainscots, uphahla nefenisha, njll. Kuyinto enhle yokuqedela indawo yesakhiwo esisha sokwakha, esingenakugcoba, esingenayo i-formaldehyde, enobungane kwezemvelo futhi eyonga. Kufaneleke ikakhulukazi ukuhlobisa isikhala sangaphakathi samaphrojekthi amakhulu, okukhombisa ubuhle nobuhle.
Amashidi Emnyango Wangaphakathi: amashidi abunjwe kahle ngokhuni oluphakeme kakhulu lokuthinta nezakhi zasentshonalanga ezifakiwe, ezinempilo yezemvelo, ubuciko obuhle kakhulu, umphumela onamandla wobukhulu obuthathu nokwakhiwa kwenoveli. Yimikhiqizo ekahle yokuhlala ngokunethezeka namasayithi, namahhotela asezinkanyezi.
Ubukhulu bomkhiqizo: 0.5-2mm
Langaphambilini Ishidi le-PC Solid / Ishidi Elingenalutho I-extrusion Line - CHEER
Olandelayo: I-PVC RIGID CORE SHEET EXTRUSION LINE
PVC Ukuphaphamisa Khombisa Foam Core Mahhala Foam Boar ...